Nepali Christian Bible Study Resources - पहिरनको प्रभाव
» इसाई घर-परिवार » बाइबलीय पहिरन - एक चुनौती! » पहिरनको प्रभाव
पहिरनको प्रभावको बारेमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा एक जना अनुसन्धानकर्ताले धेरै पुरुषहरूलाई यस्तो प्रश्‍न सोधेका थिए - "यदि तपाईं रेल गाडी वा बसको प्रतिक्षामा स्टेशनमा हुनुहुन्छ भने, अनि कस्सिएको लुगा लगाएकी राम्री स्त्री आएर तपाईंको नजिकै उभिइन् भने, के तपाईं उनीप्रति आकर्षित हुनुहुनेछ?" हो, त्यस्तो स्त्रीतिर आफू आकर्षित हुने कुरा ती पुरुषहरू मध्ये ९८ प्रतिशतले इमानदार भएर बताए। मानिलिउँ, एउटी युवती त्यहाँ रेल गाडी कुरिरहेकी छिन् र एउटा ह्यान्ड्सम् जवान रेल गाडी कुर्नको लागि नजिक आउँछ। के त्यस युवतीको ध्यान त्यस पुरुषमाथि केन्द्रित हुन्छ? के उनले आफ्नो मनमा त्यो केटासँग आफू सुतेको कल्पना गर्न थाल्छिन्? प्रायजसो स्त्रीहरूको मनमा त्यस्ता विचारहरू आउँदैनन्। तर प्रायजसो केटाहरूको मनमा त्यस्ता अनैतिक विचारहरू सजिलै आउन सक्छन्।
के बाइबलमा पहिरनको बारेमा कुनै शिक्षा दिइएको छ?
के बाइबलमा स्त्रीहरूले कस्तो लुगा लगाउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिइएको छ? स्त्रीको व्यवहार र रहन-सहनको सन्दर्भमा के बाइबलले शिक्षा दिन्छ र? हो, अवश्‍य बाइबलमा यस्तो शिक्षा पाइन्छ। यस पुस्तिकामा बाइबलका ती खण्डहरूमध्ये केहीलाई नियालेर हेर्नेछौं।
सर्वप्रथम हामी व्यवस्था २२:५ लाई हेर्नेछौं जहाँ लेखिएको छ,
"पुरुषले लाउने लुगा स्त्रीले लाउनु हुँदैन, र स्त्रीको लुगा पुरुषले लाउनुहुँदैन। यसो गर्नेलाई परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरले घृणा गर्नुहुन्छ।"
जसले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छ र उहाँको इच्छा पालन गर्न चाहन्छ निश्‍चय नै त्यस व्यक्‍तिले यो पदको अर्थ बुझ्नेछ। पुरुष र स्त्री बीचको भिन्नतालाई (जुन परमेश्‍वरले स्थापित गर्नुभयो) कायम राख्ने उद्देश्‍यले नै यो पद लेखिएको हो। केटाले केटीको लुगा लगाउनु हुँदैन, र केटीले केटाको लुगा लगाउनु हुँदैन।
मानौं, एउटी युवतीले एक जना युवकको पाइन्ट र शर्ट लगाएर हिँडिछे। परबाट उसलाई हेर्दाखेरी त्यो युवती कोजस्तो देखिन्छिन् होला? केटीजस्तो की केटाजस्तो? कहिलेकहिँ परबाट कुनै मान्छेलाई देख्दा त्यो पुरुष हो कि महिला हो भनेर ठम्याउनै गाह्रो पर्छ। थाहा पाउनलाई त उसको शरीरका अङ्गहरूतिर हेर्नुपर्छ। सैतानको योजना यही नै हो! हामी अरुहरूलाई हेर्दाखेरी हाम्रो ध्यान उनीहरूको चेहरामा होइन तर सिधै शरीरका अङ्गहरूमा जाओस् भन्ने सैतानको इच्छा छ। किनभने केटाहरूको ध्यान केटीको शरीरमा केन्द्रित हुन्छ भने सैतानले सजिलै उनीहरूलाई पापमा फसाउन सक्छ।
युवकहरूलाई व्यभिचारबाट जोगाउनलाई हितोपदेशमा उनीहरूलाई पराई स्त्रीको बिषयमा चेतावनी दिइएको छ। विशेष गरी हितोपदेश ७ अध्यायमा पराई स्त्रीको बयान यस प्रकारको पाइन्छ -
"अनि हेर, वेश्याको वस्त्र लगाएकी र धूर्त हृदय भएकी एउटी स्त्रीले त्यसलाई भेटी" (७ पद)।
वेश्‍याले कस्तो लुगा लगाउँछिन्?
आफ्नो शरीरका अङ्गहरू प्रष्टसँग प्रदर्शन गर्नको लागि उनले कस्सिएको अथवा शरीरमा टाँस्सिने लुगा लगाउँछिन्। उनले आफ्नो शरीरको आकार ग्राहकहरूलाई खिँच्ने उद्देश्‍यले प्रकट गर्छिन्। उनले आफ्नो स्तनको आकार देखाउनलाई कस्सिएको शर्ट, टी-शर्ट लाउँछिन्। टाईट पाइन्ट, हाफ स्कर्ट वा हाफ पाइन्ट लगाएर हिँड्नु उसको लागि सामान्य कुरा हो। कुर्था सुरुवाल लगाए पनि त्यो टाइट हुन्छ। साडी लगाउँदा ब्लाउस छोटो र ट्रान्सपरेन्ट उनले लगाउँछिन्।
वेश्‍याले किन त्यस्तो लुगा लगाउँछिन्? पुरुषहरूको ध्यान आफूतिर खिँच्ने र उनीहरूलाई आफ्नो ग्राहक बनाउने उद्देश्‍यले नै उनको पहिरन त्यस्तो हुन्छ।
हे ख्रीष्टियन दिदीबहिनीहरू हो! तपाईं कस्तो ढाँचाको लुगा लगाउनुहुन्छ? जब तपाईं बजारमा जानुभई कपडा किनेर सिलाइ पसलमा जानुहुन्छ, तब कस्तो ढाँचामा सिलाउन लगाउनुहुन्छ? यदि रेडिमेड लुगा किन्ने गर्नुभएको छ भने, कस्तो प्रकारको किन्नुहुन्छ? तपाईंले आफ्नो ढाँचा - फेसन - पहिरनलाई जाँच्नुपर्छ। जब अरुहरूले तपाईंलाई बाटोमा हिँडेको देख्छन्, तब उनीहरूले तपाईंको बारेमा के सोच्छन्? तपाईंको पोशाक देखेर "ए, यसले त वेश्याको पेशा अपनाएको हुनुपर्छ" भनेर उनीहरूले सोच्छन् कि? "यो केटीको धेरै केटा साथीहरू छन् होला" भनेर सोच्छन् कि? "यस युवतीले पक्कै पनि नशालु पदार्थ सेवान गर्छिन्" भनेर कसैले सोच्यो भने के तपाईं त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ? "मानिसहरूले जेसुकै सोचून्, म मनले मागेको लुगा लगाउँछु" भनेर के तपाईं ढिपी गरिरहनुभएको छ कि? तपाईंको पोशाकले अरुहरूलाई कुनै न कुनै सन्देश दिइरहेको हुन्छ। होशियार हुनुहोस् नत्रभने अरुहरूले यस्तो पनि सोच्न सक्छन् तपाईंको बारमा - "यो आइमाई डान्स क्लबमा समय बिताउँछिन् जस्तो छ - अश्‍लिल वातावरणसँग परिचितछिन् - चुरोट पिउँछिन् होला - लागु पदार्थ पिउँछिन् - अर्काको श्रीमानसँग हिँड्न बेर छैन।" अरुहरूले तपाईंको बिषयमा यस्ता सोचाइहरू राखेको यदि तपाईं चाहनुहुन्न भने, तपाईं किन त्यस्ता विचारहरू निम्त्याउने किसिमका लुगा लगाउनुहुन्छ?
१ तिमोथी २:९-१० मा लेखिएको छ,
"यहि प्रकारले स्त्रीहरूले लज्जालु स्वभाव र आत्मासंयमसित सुहाउने वस्त्रले आफूलाई सिँगारून्: बाटिएको केश, वा सुन, वा मोतीहरू, वा दामी-दामी वस्त्रले होइन, तर असल-असल कामहरूले (परमेश्‍वरको भक्ति गर्ने स्त्रीहरूलाई यसले सुहाउँछ)।"
यस पदमा उल्लेख गरिएका दुइटा कुरालाई हामी नियालेर हेरौं - पहिलो कुरा हो "लज्जालु स्वभाव" र अर्को हो "आत्मासंयम।"
लज्जालु स्वभावचाहिँ हृदय-केन्द्रित सवभाव हो। १ पत्रुस ३:४ पदमा लेखिएको छ,
"नम्र र शान्त आत्माको अविनाशी सिँगारले सिँगारिएको हृदयको भित्री मानिस होस्, जसको मूल्य परमेश्‍वरको दृष्टिमा धेरै छ।"
जुन स्त्री नम्र छिन्, उनले आफ्नो पहिरनमा नम्रता देखाउँछिन् (उनले सबैको ध्यान आफूतिर खिँच्ने उद्देश्‍यले लुगा लगाउँदिनन्। शरीरका अङ्गहरू प्रदर्शन गर्न उनलाई लाज लाग्छ।) हठी स्त्रीले उनको घमन्ड आफ्नो पहिरनद्वारा प्रस्तुत गर्छिन्। जब उनी बस वा टेम्पोमा चढ्‌छिन्, सबै पुरुषहरूको ध्यान उनीतिर जान्छ। भद्र स्वभावको विपरित, उनको स्वभाव निर्लज्ज छ। जनको जीवनको उद्देश्‍य, आकांक्षा र इच्छाहरू हृदय-केन्द्रित होइन तर शरीर-केन्द्रित छन्। "आत्मासंयमसित सुहाउने वस्त्र" को अर्थ बुझ्नलाई पहिले "आत्मासंयम" को अर्थ बुझ्नुपर्छ। यस आधुनिक युगमा, (MTV को युगमा), आत्मासंयमको कुरा गर्नु धेरैको लागि अनौठो र हाँसउठ्दो हो। "If it feels good, do it" ("मनले माग्यो भने गरे भइहाल्छ") भन्ने यस पुस्ता (generation) को भनाइ छ। तर आत्मासंयम भनेको आफ्नो शरीरलाई वशमा राख्‍नु हो। यसको अर्थ हो आफ्नै अभिलाषाको दास नहुनु।
आफ्नो शरीरको अभिलाषा र इच्छाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति कस्तो हुन्छ?
सहारा भन्ने विश्‍वासी युवतीको जीवनलाई हेरौं - उनी संसारका अभिलाषाहरूसँग परिचित छिन् किनभने येशूमा विश्‍वास गर्नुभन्दा पहिला उनी संसारका कुराहरूमा डुबेकी थिइन्। तर अहिलेको सहारा पहिलाको सहाराजस्तो छैन। उनका पहिलेका साथीहरूलाई अब साहाराको सबै कुराहरू ‍- लुगा, सङ्गीत, र सम्पूर्ण ढाँचा - अनौठो लाग्छ। उनले किन पहिलाको सङ्गीत सुन्न छोडिन् भनेर उनीहरूले बुझ्नै सक्दैनन्। उनले नयाँ-नयाँ ढाँचाका लुगाहरू लाउन छोडेको र भद्र पोशाक लगाउन थालेको देख्दा उनीहरू वाल्ल परेका छन्। पक्कै पनि उनको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको उनीहरूले देख्छन्। के भो त, सहारालाई?! के अब उनको मनले रक सङ्गीत सुन्न चाहँदैन? चाहन्छ, नि! तर अब उनी पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा छिन् र उनले परमेश्‍वरबाट बोलावट पाएकी छिन्,
"जसरी तिमीहरूलाई बोलाउनुहुने पवित्र हुनुहुन्छ, उसरी नै तिमीहरू पनि सबै प्रकारका चालचलनमा पवित्र होओ। किनकि यो लेखिएको छ: 'तिमीहरू पवित्र होओ, किनकि म पवित्र छु'" (१ पत्रुस १:१५,१६)।
त्यसैले, सहाराको मन वा शरीरले रेडियोको सङ्गीत सुन्न मागे तापनि, र टेलिभिजन र फिल्मको सङ्गीत सुन्न रुचाए तापनि उनले आफ्नो शरीरको त्यो कुइच्छालाई वशमा राख्छिन् र आफ्नो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिरको रुपमा अर्पण गर्छिन्। उनी संयमी छिन् र शरीरले मागेको हरेक कुरा होइन तर परमेश्‍वरले आज्ञा गर्नुभएको हरेक कुरा गर्ने प्रयासमा छिन्। लुगा लगाउने सन्दर्भमा उनले व्यभिचारिणी हिरोनीहरूको अनुसरण गर्दिनन्। उनले परमेश्‍वरको इच्छा अनुसार लुगा लगाउँछिन्।
१ तिमोथी २:९-१० पदहरलाई फेरि हरौं।
यस खण्डले विश्‍वासी स्त्रीलाई सिकाउन खोजिरहेको छ - स्त्रीले आफ्नो सिङ्गार-पटारमा घण्टौं बिताउनु हुँदैन। धेरै-धेरै सुन र गहना लगाएर हिँड्नु हुँदैन। हरेक नयाँ निस्केको फेसन अनुसार लुगा लगाउनु हुँदैन। किनभने आफूलाई संसारको फेसनअनुसार सिङ्गार्नु भनेको अरुहरूको ध्यान आफूतिर खिच्न खोज्नु हो। संसारका स्त्रीहरूलाई त्यसरी आफूलाई सिङ्गार्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। तिनीहरू हराएका छन्, परमेश्‍वररहित छन्, घमन्डी छन्, र निर्लज्ज छन्। तर ख्रीष्टमा विश्‍वासी स्त्री यदि संसारको चरित्रहिन फेसनमा चल्छिन् भने, त्यो त भेडाले ब्वाँसोको भेष धारण गरेको जस्तै हुन्छ।
आफूलाई सिङ्गार्दा, विश्‍वासी दिदीबहिनीहरूले संसारको अनुसरण नगरून्। मानिसहरूलाई खुसी पार्ने उद्देश्‍यले होइन तर परमेश्‍वरलाई प्रसन्न तुल्याउने उद्देश्यले आफूलाई सिङ्गारून्।
"चाहे तिमीहरू खाओ, चाहे पिओ, चाहे तिमीहरू जेसुकै गर, सबै कुरा परमेश्‍वरको निम्ति गर" (१ कोरिन्थी १०:१३)।
थोत्रो धोती लगाएर, कपालै नकोरिकन, फोहोरी भएर हिँड्नु पर्छ भनेर पक्कै पनि यी पदहरूले सिकाउन खोजेको होइन किनभने त्यसबाट परमेश्‍वरको महिमा हुँदै हुँदैन! परमेश्‍वरको महिमा र आदर हुने हिसाबले स्त्रीले लुगा लगाउनु पर्छ र आफूलाई सिँगार्नुपर्छ।
ख्रीष्टियन युवती परमेश्‍वरप्रतिको उसको भक्ति र येशू ख्रीष्टको निम्ति उसले गरेको सेवाद्वारा चिनिनुपर्छ। तपाईंलाई हेर्दाखेरी अरुहरूले के देख्‍छन्? बलिउडकी दासी देख्‍छन् कि परमेश्‍वरको दासी?
परमेश्‍वरको दृष्टिकोणमा ग्रहणयोग्य वस्त्र के हो, त?
उत्पत्ती ३ अध्यायमा आदम र हव्वाको नाङ्गोपना ढाक्नलाई परमेश्‍वरले उनीहरूको लागि लुगा अथवा लामो वस्त्र बनाइदिनुभयो। (यस खण्डमा उल्लेखित लुगा शब्दले हिब्रू भाषामा लामो कोट्लाई सङ्केत गर्छ।) शारीरिक आनन्दमा लीन भएर शरीरलाई अनैतिक ढङ्गले प्रदर्शन गरेर हिँड्नु विश्‍वासी दिदीबहिनिहरूलाई कहिले पनि सुहाउँदैन। निर्लज्ज ढङ्गले लुगा लगाउनु भनेको टाइट लुगा लगाएर यौनसित सम्बन्धित शरीरका अङ्गहरूलाई देखाउनु हो।
"घुम्टो हटा, फरिया माथि सार्, नाङ्गो जाँघ देखाएर नदी तर्। तेरो नग्नता उघारिनेछ। तेरो शर्म प्रकट हुनेछ। म बदला लिनेछु" (यशैया ४७:२,३)।
हाफ स्कर्ट, हाफ पाइन्ट, छाती देखाउने शर्ट, नाइटो देखाउने शर्ट (नाइटो देखाउने साडीको ब्लाउजसमेत), छाती देखाउने गाउन्, चुरिदार कुर्था सुरुवाल, इत्यादी - यी सब छाडा लुगाहरू हुन्।
स्त्रीहरूले याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने गर्धनदेखि पाउसम्म शरीरलाई छोप्ने लुगा लगाइयो भने पनि त्यो लुगा टाइट छ भने वा त्यो लुगा ट्रान्सपरेन्ट छ भने लामो भएर मात्र केही काम गर्दैन। ऐना अगाडि उभिएर आफ्नो वस्त्रलाई जाँच्नुपर्छ तर कति चोटी त्यतिले मात्र पुग्दैन। बजारमा पाइने धेरै कपडा ट्रान्सपरेन्ट छ। कोठाको धमिलो बत्तीको उज्यालोमा त्यो कपडा बाक्लो देखिन दक्छ जबकि बाहिर घाममा हेर्दाखेरी त्यो ज्यादै पातलो देखिन्छ। त्यसैले, साथी वा आमा वा सासु वा आफ्नो श्रीमान्‌को अगाडि उभिएर सोध्नुहोस् - "यो लुगा ट्रान्सपरेन्ट छ कि छैन? ब्रा देखिन्छ कि देखिँदैन?"
नेपालको एउटा मण्डलीको अगुवाले यस्तो भन्नुभयो, "स्त्रीले जब टाइट (कस्सिएको) लुगा लगाउँछिन्, त्यो लुगा जति लामो भए पनि, शरीरलाई छोपे तापनि, त्यसले पुरुषमा पापपूर्ण अभिलाषाहरू जगाउन सक्छ। स्त्रीले लगाएको टाइट लुगाद्वारा पुरुषको ध्यान त्यस स्त्रीको रूपतिर आकर्षित हुन्छ र उसको मनमा व्यभिचार गर्ने इच्छा आउँछ।"
तसर्थ, असल लुगाले १) शरीरलाई राम्रोसँग ढाक्छ (साडी लाउनु राम्रो हो, तर साडीको ब्लाउज छाती देखाउने खालको छ भने अथवा नाइटो देखाउने छोटो खालको छ भने वा ट्रान्सपरेन्ट छ भने त्यो ठीक होइन।) २) शरीरको आकार देखाउँदैन (चुरिदार कुर्था सुरुवालले शरीरलाई ढाक्छ, तर शरीरको आकार पनि ठ्याक्कै देखाउने भएकोले त्यो पाइन्टजस्तै नराम्रो लुगा हो।) ३) तीघ्रालाई ढाक्छ (हाफ स्कर्ट, हाफ पाइन्टको कुरै नगरौं।) ४) छातीलाई पुरै ढाक्छ (कुनै कुनै लुगा लामो, बाक्लो, र शरीरको आकार नदेखाउने हुनसक्छ तर त्यो छातीनेर खुल्ला भएकोले ठीक छैन। त्यस्तो लुगा लगाउँदा जब स्त्री खाना पस्कन वा भाँडा माझ्न तलतिर घोप्टो पर्छिन् तब उनको छाती पूरै देखिन्छ!)
यो पृष्ठ नयाँ सृष्टि प्रकाशनको पुस्तिका बाइबलीय पहिरन - एक चुनौति! (पहिलो संस्करण २०६५) बाट प्रकाशकको अनुमतिले यहाँ समावेश गरिएको हो। प्रकाशकलाई Psalm40verse5@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
« पुरुष र स्त्री बीचको भिन्नता
अभिभावकहरूलाई सल्लाह »